Halkee laga Bilaabayaa Bilaabis? | Martech Zone
Halkee laga Bilaabayaa Bilaabis?
Talaado, Febraayo 24, 2009 Talaado, Oktoobar 7, 2014 Douglas Karr
Waxaa jira faa'iidooyin aan caadi aheyn oo laga helo shirkad laga bilaabo Indiana. Hoggaanka ganacsatadu waa shabakad ciriiri ah oo dad ah oo aamin ah lana caddeeyey. Waxaan ka hadlay Indiana iyo Indianapolis inay yihiin goob muhiim u ah shirkad ganacsi inay ka furato. Dadku waa dad aqoon leh oo dadaal badan. Hantida ma guurtada ah weli waa mid ka mid ah suuqyada ugu xasilloon dalka oo dhan.
Haddaan ganacsi bilaabayo, Indianapolis waa meesha aan doonayo inaan noqdo! Hantida ma guurtada ahi waa mid aan qaali ahayn oo gobolka iyo dawladaha hoose labaduba waa ganacsi-yaqaan.
Taasi ma ku filan tahay in la bilaabo ganacsi, in kastoo?
Bilaabida ganacsi waxay u baahan tahay maalgelin. Indiana ma leedahay?
The Sanduuqa Qarniga 21-aad wuxuu diiradda saarayaa howlaha ganacsi ee muujiyay kartida suuqa ee ganacsiga tikniyoolajiyadaha hal-abuurka ah.
Qaar ka mid ah dadka wax naqdiya waxay ku doodayaan in kastoo software-ka iyo teknolojiyaddu ay u muuqdaan kuwa leh kobaca shaqo ee ugu badan, haddana tiknoolajiyadda noolaha ayaa soo jiidanaysa maalgelinta ugu badan. Hal sabab ayaa laga yaabaa inay tahay isku xirnaanta maxalliga ah ee bio-tech ay ku leeyihiin nidaamka Jaamacadda. Waxaan rajeynayaa in tani aysan ahayn - Waxaan rajeynayaa in maalgalintani ay ku socoto fikradaha fursadda ugu weyn.
Bannaanka Sanduuqa Qarniga 21aad, ma jiraan xulashooyin badan. Maalgelinta gaarka loo leeyahay waxay ka faa'iideysanaysaa maalgelinta maal-gashiga 'Venture Capitalist' maadaama ay caadi ahaan la timaado xargo aan badnayn oo ku xiran. Si kastaba ha noqotee, maalgalinta gaarka loo leeyahay ayaa sii waday inay dhex gasho ganacsatada maxalliga ah ee maalgeliyey bilowga kale… oo maalgeliyey… maalgeliyey… oo maalgeliyey. Waxay dareemeysaa in qof kastaa dib ugu noqonayo isla isla ceynkiina in badan
Gobolka Indiana wuxuu leeyahay 2 bilyaneer. Saaxiibkey ayaa ila wadaagay maanta in Orange County, California ay leedahay 8 bilyaneer oo ka badan 28 bilyan oo doolar. Taasi waa wax aad u kala duwan, waxayna hubaal tahay inay saameyn ku yeelaneyso awooda bilowga maxalliga ah ay ku heli karaan maalgelin.
Marka - su'aashu had iyo jeer maahan meesha ugu fiican ee laga bilaabo xawaalad. Su'aashu waxay noqon kartaa xagee laga helayaa lacag lagu maalgeliyo bilowgaaga! Waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad in badan ku maalgelin lahayd sanduuqa Qarniga 21-aad haddii aad rabto inaad sii haysato hal-abuurnimada hal-abuurka ah ee halkan ka jirta!
Afarta fardooley ee bilowga
Sida Loogu Gooyo Gawaaridaada Blog qeybtii
Febraayo 24, 2009 saacadu markay tahay 9: 38 AM
Kheyraad kale oo wanaagsan ayaa ah Sanduuqa Wax-soo-saarka cusub ee ka soo baxa Purdue.
Suuqgeynta Ganacsiga Matt
Feb 24, 2009 markay ahayd 3:10 PM
Waxaad si fiican u tiri Douglas. Meesha lacagta ku baxdo tag. Bilaabashada badankood lacagtu waa halka ay ku yaalliin maalgashadayaashaadu.
Haddii aad maamusho shirkad SaaS ah, waxaad u badan tahay inaad maalgelin ka hesho Silicon Valley, Boston, Austin ama Boulder.
Haddii aad maamusho bilowga tamarta qorraxda, waxaa laga yaabaa in Phoenix ay noqon laheyd meel wanaagsan oo la joogo.
Markaad kacdid oo aad shaqeyneyso oo aad leedahay macaamiil lacag leh, markaa waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in laga furo xafiis maxalli ah meesha ay macaamiishaadu joogaan. Waxaan u maleynayaa Wal Mart inuu uga baahan yahay alaab-qeybiyeyaashooda inay xafiis gobol ku yeeshaan meel u dhow xaruntooda.
Indiana waxay ka hadlaysaa rabitaankeeda ah inay noqoto jawi saaxiibtinimo bilow ah. Laakiin ficiladu kaliya ma taageerayaan tan. Sanduuqa Qarniga 21-aad waa qayb yar oo bilow wanaagsan ah. Si kastaba ha noqotee, ilaha kale sida maalgelinta maalgashiga, hoggaanka fulinta, iwm ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Waxaan rajaynayaa in arimuhu isbadalaan, laakiin Indiana waxay umuuqataa dariiq aad u dhawrsan oo aan noqon karin ganacsade waqtigan la joogo. Waxaa laga yaabaa in giraangiraha ay ku jiraan dhaqdhaqaaq si loo beddelo tan.
Waxaa jira dad badan oo gobolka Indiana ah oo daneynaya bilowga qorraxda. Waxaan iskudayaa inaan lamacaaleeyo la-hawlgalayaasha bilowga wax soo saarka qoraxda. Kim koch